Ukuthi ingane kufanele enze imisebenzi yasekhaya, akakubangeli impikiswano abazali. Kodwa ukubukwa ngalokho kufanele, ukuphikisana eziningi ezigqanyisiwe. Abanye abazali ukuphathisa amacala ingane ezihilela yakhe izidingo siqu: izitsha ngemva ithoyizi nezinto ukugcina izinto zabo kuhlanzekile. Abanye bafuna wemfanelo izingane imisebenzi evamile yomkhaya, angathathwa eziqondiswe ekusizeni umama noma ubaba. Ngokungangabazeki, enikeza yemfanelo ingane, kufanele inake yobudala kanye nekhono lakhe izici.
Uma abazali bengakwazi ngeso lengqondo imisebenzi izingane ekhaya, akunakwenzeka ukuthi uzobe eziqhutshwa nsuku zonke.
Abazali abaningi bakuthola lo mbuzo aphambene. Kodwa lena isihloko eziyinkimbinkimbi kakhulu. Lokhu okulandelayo okukhethwa kukho kungenzeka:
Kuwo wonke umkhaya kufanele kube khona imisebenzi izingane, ingane ejwayele umsebenzi onzima futhi ukunemba. Nge isimo sengqondo esinjalo emisebenzini bona siguqulelwa isenzo abstract, zisabalulekile ngokwayo futhi ayinayo orientation esisebenzayo. Uma ukuphoqwa zangaphandle uzonyamalala, kunjalo ngeke kwenziwe.
Kwakungelula ukwenza imisebenzi yasekhaya yasendlini okufundiswa ingane ukuhlela, kuyamsiza uzibekele imigomo, ukuthuthukisa amakhono athile ukuze asize le migomo. Kamuva, ingane kanjalo uyokuqonda ukuthi izinto ayifake endaweni, kulondolozwa isikhathi okwakungathi sisetshenziselwe usesho.
Izibopho ukufundisa izingane ukubala amabutho azo. Okokuqala, ukushaja ukubeka ingane abadala. Uma udinga ukubeka ukuze ingane, idinga umsebenzi eziyinkimbinkimbi ku subtasks eziningana. Ngokwesibonelo, ukubuyela emuva umshini ukuqoqa cubes, izincwadi embondelene, njll
Homework lifundisa ingane ukuba ukwazi ukuzithiba. Lapho efeza imisebenzi yasekhaya izingane zifunde ukwakha isimo sabo sokusebenza. Lena ahlele kakhulu.
Ukuba yemfanelo ethu kusiza ukuchazela ingane ukuthi kuyinto ilungu ebalulekile yomkhaya, njengoba iletha ngokuqondene namandla ayo ukuphila ngomnikelo omncane.
Ukuxoxisana ngama ngemisebenzi yasendlini, ingane igcina ifundile sicondze ukuphila njengoba inqubo iterative.
Imisebenzi ingane: indlela abanye igunya?
Kabusha sengqondo yakho yenza imisebenzi yasekhaya. Uma ingane izizwa kanjani yilokhu ukuba unina akawuthandi ukukhipha udoti, akufanele silindele ukuba nomdlandla. Kuyadingeka ukuba agcizelele ukubaluleka kwalo msebenzi ngoba umndeni. Kungaba kuhle ukwethula izakhi yomdlalo: kanjani uyobheka flat, uma kungekhona amasonto amabili, athathe udoti, futhi uma izinyanga eziyisithupha?
Ngokuvamile kudingeka ukubonga ingane, ukugcizelela ukubaluleka konke akwenzayo ngoba umndeni.
Sebenzisa amathekhiniki alandelako izingane imithwalo yemfanelo kungathatha indawo nakho okuthakazelisayo:
Cela ingane ukuba ngezikhathi ezithile izindima namanye amalungu omndeni. Makahambe jwayelana nabanye, izinhlobo eziyinkimbinkimbi lomsebenzi.
Vumela ingane ukuba uthenge futhi ukukhetha yokuqhuba umsebenzi wasendlini. Uma gcwalisa ke ukugeza izinto zabo noma ukugeza izitsha, amnike imali ukuthengwa yokuhlanza izimpushana noma uketshezi.
Yenza isici zokudala umsebenzi wesikole. Lokhu kungaba njalo ukupheka salads. Nikeza ingane zokupheka ngomumo, kodwa ngesikhathi esifanayo ukhuthaze ucwaningo ezimele Culinary.
Kubalulekile ukuthi waba ini ukubona imisebenzi izingane nabazali. Ukuze wenze lokhu udinga ukwakha uhlelo zokusebenza Kubhekwe imigomo oyinhloko, unezela ezihlukahlukene ukuze inqubo umsebenzi. Futhi, ungakhohlwa mayelana isibonelo siqu futhi ubekezele.
Umzimba Baby - «kumelwe ukuba» e wezigqoko ingane